Ukubhukisha Ngosuku Olufanayo Kufumaneka # Umgangatho Ophezulu # Indlu Yonke # Eyona Sunshine # Ivulekileyo Indawo Yokuhlala # BBQ - I-Airbnb
Ukubhukisha Ngosuku Olufanayo Kufumaneka # Umgangatho Ophezulu # Indlu Yonke # Eyona Sunshine # Ivulekileyo Indawo Yokuhlala # BBQ
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguLifestyle Hotel Kumamoto
ULifestyle Hotel Kumamoto yi-Superhost
Iikhilomitha eziyi-30 ukuya eKamisei Arcade, kunye neevenkile zokutyela ezikhethekileyo eziphosakeleyo.♪
Umgangatho ophezulu wesakhiwo esinemigangatho emine♪ yindlu yonke ekumgangatho omnye, kwaye kucetyiswa kwabo badinga nje igumbi♪　"lokuhlala" elinelanga elimnandi kunye nelaphu elikhulu.
Le flethi okanye indlu ekwicomplex isembindini wedolophu kukho i-arcade kwicala le-Kami-tori. Igumbi yi-43 sqm kunye neebhedi ezi-3, i-futon eyi-1, kunye nekhitshi elipheleleyo kunye negumbi lokutyela, ngoko likhulu kuneehotele kunye nezinye iindawo zokuhlala. Elinye icala linyanzelekile ukuba linyuke izitepsi, njengoko kungekho lifti. Ngenxa yoku, nangona kunjalo, unokukuvuyela ukuhlala ngexabiso elibhetele.
Eli ligumbi elipheleleyo kumphezulu wesakhiwo esinemigangatho emine (wonke umgangatho omnye kumgangatho wesine)♪
Ubukhulu begumbi buyi-43 mvele kwaye ityeya
ingu-15 miliyoni♪. Kukho inyama eyojiweyo esetwe kwi-terrace, ngoko unokuyonwabela ngoko nangoko ukuba uthenga kuphela izinto zokupheka (kukho isilarha nevenkile enkulu ekufutshane)
· Ungachitha ixesha lokuphumla kwindawo ephezu kophahla kwindawo enelanga kakhulu
♪ kunye nosuku oluvuyisayo.
Unokonwabela isidlo sasemini kunye ne-BBQ ngoxa umamele umculo owuthandayo,
kwaye le ngingqi yeyona venkile ikhethekileyo yokutyela eKumamoto (eKamigami backstreets), ngoko
Igumbi linebhalkhoni etofotofo♪ enendawo
・Igumbi lilungisiwe; yonke into intsha
・ Igumbi kunye neveranda zifumana ilanga elaneleyo
4.85 · Izimvo eziyi-196
Eli gumbi likwindawo esembindini we "Ue Dori/Umthi".
Ithatha imizuzu eyi-5 ukusuka kwindawo ekufutshane yokumisa, iTorimachi-suji Mizutocho.
Kukho iivenkile ezininzi ezikhethekileyo zeempahla, iikhefi, iibhari, kunye nezinye iindawo zokutyela ezikhethekileyo kwizitrato, kwaye isixeko ngokwaso sinomoya wasekuhlaleni opholileyo. Ukususela kwiivenkile ezidumileyo ezingenakubhukishwa, kukho iibhari zerayisi, iivenkile zeempahla ezidibeneyo, njl. ezinokukonwabela ngaphandle kokuchitha imali, kwaye ndicinga ukuba kumnandi ukuhamba-hamba nje.♪
☆ ivenkile ekulula ukuyigcina (iimitha eziyi-50 ukuya kwi-Family Mart, iimitha eziyi-100 ukuya kwi-Even Eleven☆) iimitha eziyi-150 ukuya kwivenkile
☆Ukuhamba imizuzu eyi-50 ukuya kwipaki enkulu (eShirakawa Park)
Imizuzu eyi-10 xa uhamba ngeenyawo ukuya☆☆ eKumamoto☆☆ Castle
Ukuhamba imizuzu eyi-5 ukuya eKumamoto Square☆
I-Kami-tori yeyona ndawo ikhethekileyo eKumamoto. Kukho iivenkile ezininzi, iikhefi, iivenkile zokutyela kunye neebhari apha. Ekubeni isembindini wedolophu, kodwa ikufutshane nendawo ehlala abantu, kukho iivenkile ezahlukahlukeneyo ezenza kube lula ukuthenga. Ayondawo enabantu abakhenkethi, ngoko unokuchitha ngokukhululekileyo ixesha phakathi kwabantu basekuhlaleni. Iofisi yethu ikwindawo ekufutshane, ngoko ungasifotela umyalezo kwaye siza kukucebisa ngeendawo ezintle.
Umbuki zindwendwe ngu- Lifestyle Hotel Kumamoto
Izimvo eziyi-1 201
Nceda ungoyiki ukundichazela ngayo nayiphi na ingxaki okanye isicelo onokuba naso ngohambo lwakho, oko kukuthi iingxaki zempahla, ukugcina imoto yokuqesha (ukufowuna ngesiJapan), njl.
Inombolo yomthetho: I-Hotels and Inns Business Act | 熊本県熊本市保健所 | 指令(生衛)第116号
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chūō-ku, Kumamoto